Axmed Madoobe oo markale wada-hadallo ugu baaqay dowladda Federaalka | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN Axmed Madoobe oo markale wada-hadallo ugu baaqay dowladda Federaalka
Axmed Madoobe oo markale wada-hadallo ugu baaqay dowladda Federaalka
Baladweyne(HNN)- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo magaalada Kismaayo ka daah furay gogosha Shirweynaha dib u heshiisinta iyo nabadaynta Jubbaland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaalada dalka ee khilaafka dowladda iyo Maamulka Jubbaland.
Axmed Madoobe oo hadal ka jeediyey shirka ayaa Xubnaha isbadal-doonka ee heshiiska la galay Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo masuuliyiintooda uga mahad celiyay go’aanka ay qaateen,isla markaana ay qayb ka noqonayaan sidii xooga loo saari lahaa looguna gacan siin lahaa Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam dib u dhiska iyo dardar galinta howlaha horyaala.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu balan qaaday in albaabada uu u furi doono qof walba oo ka aragti duwanaa oo wax ka tabanayay Dowlada isla markana dhamaan dadka ree Jubbaland loogu adeegi doono si Siman oo aan eex lahayn.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in ay mar walba ka go’nayd sidii qof walba oo Jubbaland wax ka tabanaya loo dhagaysan lahaa iyadoo taas ay wali hakad ugu jirto dhismaha Xukuumada Cusub isagoo intaas ku daray in dhamaan dadka ree Jubbaland ay halkaas iska wada dhex arki doonan.
Dhinaca Kale Dowlada Federaalka ah ayuu Madaxweynahu sheegay inay mar walba Jubbaland diyaar ula tahay wada shaqayn iyo in wixii kala aragti duwanaan ah wada hadal lagu dhameeyo sida heshiiska Jubbaland iyo golahii isbadal doonkuba ay khilaafkooda xalka nabada ah uga gaareen Dowlada ayuu Madaxweynahu ugu baaqay inay doorkeeda qaadato sidii Bulshada loo midayn lahaa.
Previous articleRa’iisul wasaare Khayre oo Guddoomiyay shir looga hadlayay Saameynta Coronavirus uu ku yeeshay waxbarashada dalka
Next articleRa’iisul wasaasaha Soomaaliya oo ku baaqay si loo gurmado meelaha Fatahaadaha saameeyeen